OEM & ODM Mpanamboatra fonosana miasa | China OEM & ODM Operation Pack Factory & mpamatsy
Ho an'ny fiasa klinika amin'ny fampiasana indray mandeha ny fiarovana ara-pahasalamana, izay afaka misoroka tsara ny aretina faharoa.
Kitapo lohany sy hatoka
Ny fonosana fandidiana dia natao manokana hahitana izay ilaina rehetra hanaovana karazana fomba fandidiana manokana. Tsy voafehy izy ireo mba hiarovana fotoana sy hampihenana ny vidin'ny fametrahana ny efitrano fandidiana. Ny fonosana tsirairay dia misy ny entana fandidiana sy ny takela-by ilaina manokana.
Ny fonosana fandidiana tsy azo ampiasaina dia ampiasaina betsaka amin'ny fandidiana hopitaly. izy io dia misy lavaka lehibe tokana, tokana fandidiana, lamba, akanjo fandidiana, lamba famaohana, lamba tokan-tena, fonon-tanana vita amin'ny fingotra sns izay afaka manakana ny fidiran'ny rano sy bakteria ary misoroka ny aretina. Ny fikajiana manokana dia azo fidina sy alamina arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa.
Kitapo fandidiana intervensional
1. Ny vokatra dia tokony hapetaka amin'ny filaharan'ny mpandidy
2. Ny vokatra fako aorian'ny fampiasana dia tokony ho tsaboina miaraka
3. Ny vokatra dia tokony hotehirizina amin'ny toerana misy rivotra sy maina mba hialana amin'ny fifandraisana amin'ny akora manimba toy ny asidra sy alkaly
4. Ny vokatra dia manan-kery mandritra ny 3 taona hatramin'ny daty famokarana
Tehirizo amin'ny toerana madio sy maina ary misy rivotra madio tsy ho azon'ny lelafo misokatra.